10 Askari oo ka tirsan ciidamada DF oo Gabar 14 ku kufsaday Muqdisho. - Caasimada Online
Home Warar 10 Askari oo ka tirsan ciidamada DF oo Gabar 14 ku kufsaday...
10 Askari oo ka tirsan ciidamada DF oo Gabar 14 ku kufsaday Muqdisho.
Nolal iyo geeri ayay u dhaxaysaa Xaalada Gabar 14 jir ah oo ciidamada Dowlada Soomaaliya ay ku kufsadeen Magaalada Muqdisho.
Gabadhan oo lagu magacaabo Xaliimo ayaa waxaa ay ku jirtaa Cisbitaal Banaadir xaaladeeda Caafimaadna waa ay liidataa Sida ay sheegayaan dhaqaatiirta Cisbitaalka.
Mar gabartan ay u waramaysay Warbaahinta oo ay ka sheekeynaysay Sida ay u kufsadeen Ciidanka Dowlada waxaa ay sheegtay in iyadoo ka soo adeegaysa Xili habeen ah dukaan u agdhawaa gurigooda uu isku duubay Askari dowlada ah kadibna ay aragtay Tobonkale oo isla Askarta oo ku soo ordaya iyada.
Waxaa ay sheegtay in waqtigaas uu Miirkeeda tagay ayna aragtay iyadoo Guri dhexjiifta,waxaana ay qirtay in Tobaneeyo ay ahaayeen Askarta kufsatay.
Hooyada gabadha dhashay oo ilmaynaysa ayaa sheegtay inaysan haysan wax dhaqaala ah oo ay ku dawaynayso gabadheeda waxaana ay sharciga ka dalbatay in xaqeeda loo soo dhiciyo.
Gabadha ayaa iyadana ku jirta Xaalada Miirbeel ah wajigeedana waa uu badalmay waxaana ka muuqday Jirdil ay ugaysteen Ciidamada Dowlada oo looga bartay in dadka Shacabka ay ku tuntaan ,mana jirto cid xaqa dadka shacabka u soo saarta.